भान्सा एकाइहरूको मानक उचाइ के हो?
के एक मानक उचाइ प्रदान भान्सा एकाइहरूको, र यो के मापदण्डहरू निर्धारण गरिन्छ? तपाईंले यो प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यो लेखमा सामाग्री सिक्न स्वागत छ।
कस्तो स्तर अवस्थित?
पहिले, को हेडसेट सबै तत्व एक एकाइ रूपमा काम गर्न मेल हुनुपर्छ। खोजी औसत समायोजित अनुमान मा मंत्रिमंडलों र countertops को सर्वोत्कृष्ट संयोजन लागि घर धनी blaming जस्तै मानक आकार लामो सन्दर्भको रूपमा बुझे छन्। सबै empirically औसत व्यक्ति को मापदण्डहरु अनुसार गणना गरिएको छ - हामी भान्सा एकाइहरूको के उचाइ, हामी आवश्यक प्रश्न, माग गर्न सक्दैन।
तल्लो भान्सा एकाइहरूको उचाइ
भान्सा मा सबै फर्नीचर माथिल्लो र तल्लो निलम्बन (तल) मंत्रिमंडलों विभाजन गरिएको छ। र हेडसेट तल्लो compartments हामी भारी घरेलू वस्तुहरू (निर्मित उपकरण सहित) र विभिन्न बर्तन र उत्पादनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, तल्लो अलमारी आफ्नो countertops काम गरिरहेको सतह रूपमा सेवा बढी कार्यात्मक छन्। यो जडान, र 820 मिमी (तालिका शीर्ष बिना) बराबर छ भान्सा एकाइहरूको एक मानक उचाइ, बनाए। को काम सतह तल देखि 850 मिमी को एक अधिकतम र सहज उचाइ छ जसमा परिणाम काउन्टरटप मा सुधार थप्न र प्राप्त।
यो भित्री डिजाइनर गणना जो परे "विकास" जाने हुँदैन तल्लो भान्सा मंत्रिमंडलों को छ भनेर थाह महत्त्वपूर्ण छ। यो आंकडा अन्यथा, कुनै पनि भान्सा काम निरन्तर असुविधाको परिवर्तन छ 90 सेमी बराबर छ।।
निर्मित वाशिंग मिसिन
हामी पहिले देखि नै हेडसेटहरू उपकरण सम्मिलित बारेमा उल्लेख गरेका छन्। तल्ला (85 सेमी) बाट भान्सा एकाइ को उचाइ सजिलो मानक लुगा धुने मेसिन भित्र राख्न बनाउँछ। तपाईं ठाउँ मा सीमित छन् र जहाँ धेरै उपकरण राख्न थाहा छैन भने, मानक फर्नीचर स्पष्ट आफ्नो जीवन सजिलो बनाउन डिजाइन गरिएको छ।
भान्सा फर्नीचर को चौडाई स्तर
यी निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकता र जीवित अवस्थाको विशेषताहरु दुवै आधारित क्रममा फर्नीचर को निर्माण, को लागि प्रदान गरिन्छ। यसरी, एकल मंत्रिमंडलों 30 50 सेमी को दायरा मा एक चौडाई हुनुपर्छ, र bivalves को चौडाई 60 100 सेमी देखि दायरा भित्र फिट हुनुपर्छ। सामान्यतया, संकीर्ण र लागि सानो भान्सा मान्छे सानो अनुज्ञेय मूल्य को चौडाई किनेको। तल्लो कुना मन्त्री पनि वरिपरि 90 सेमी मा निश्चित जो आफ्नो अधिकतम widths, मिल्यो।
कैबिनेट को गहिराई
को भित्री ठाउँ फर्निचरहरू यदि तपाईं भान्सा आदेश जाँदैछन् त, उचाइ मंत्रिमंडलों 90 सेमी भन्दा बढी हुँदैन, तीन मात्रा मापन गरिएको छ, र आफ्नो गहिराई 50-55 सेमी को सीमा निर्धारण गरिन्छ। यस काउन्टरटप को चौडाई, साथै यसको कच्चा माल पनि तल भाग को गहिराई को विकल्प असर हेडसेट।
माथिल्लो भान्सा मंत्रिमंडलों को आयाम
भान्सा एकाइहरूको माथिल्लो भाग को मानक आकार कुरा, पहिले माथिल्लो भाग को कार्यात्मक प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्न। हामी माथिल्लो अलमारियाँ, घर उपकरण र भारी वस्तुहरु राख्नु छैन। मूलतः, त्यहाँ थोक खाद्य पदार्थ, मसला र भान्सा बर्तन निश्छल भण्डारण छन्। माथिल्लो भाग मा भान्सा एकाइहरूको उचाइ किन फरक हुन सक्छ भन्ने छ। यो कथन गणना र दायरा छन् जो अझै पनि सीमा चौडाई, त्यसपछि तपाईँले सोध्नु :. किन चौडाई औसत मूल्य बीच यस्तो ठूलो प्रसार छ सही छ 40 100 सेमी देखि बुझाउँछ? वास्तवमा, यो सद्भाव र धारणा को निष्ठा disturbs यदि कुनै एक सेट जस्तै हुनेछ किनभने माथिल्लो अलमारी, निलम्बित सिद्धांततः तल को आकार बाँधिएको। यो माथिल्लो मन्त्री अव्यवस्था रूपमा कार्य गर्नुपर्छ भन्ने होइन सम्झना हुनुपर्छ। त्यसैले, भान्सा बर्तन गहिराई को माथिल्लो भण्डारण सामान्यतया 30 सेमी अधिक छैन। यो आकार खुलेर को हेडसेट को तल काम सतह प्रयोग गर्न अनुमति छ।
60 x 60 सेमी - कैबिनेट माथिल्लो कुनामा को सर्वोत्कृष्ट आयाम।
भान्सा एकाइहरु को अधिकतम उचाइ सफलतापूर्वक गणना। त्यहाँ तल्ला र झुन्डिएको लकर बीच सर्वोत्कृष्ट दूरी छ? वास्तवमा, यो सबै धेरै वृद्धि पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री वा पाहुना, र कसरी त्यो (उहाँले) शीर्ष शेल्फ पुग्न सजिलो हुनेछ निर्भर गर्दछ। गर्छन् नियमित कैबिनेट सामग्रीहरू प्राप्त गर्न एक कुर्सी मा, वास्तवमा मा प्राप्त,! तथापि, तल्लो र माथिल्लो टियर बीच दूरी 45 भन्दा कम सेमी। अन्यथा, सञ्चालन प्यानल एक जोखिम फिर्ता बरु ससर्त वा सजावटी सतह हुँदैन।
तपाईँले व्यक्तिगत परियोजना मा फर्नीचर आदेश, साथै एक वाशिंग मिसिन को मामला मा योजना भने, तपाईं को लागि एक उच्च पक्ष मामला प्रदान गर्न सक्छन् को एम्बेड रेफ्रिजरेटर। घरेलू उपकरण को संस्थापन को मामला मा भान्सा एकाइहरूको उचाइ उपकरण औसत मापदण्डहरू देखि गणना गरिएको छ। त्यसैले, फ्रिज सजिलै कोठामा को चौडाई र गहिराई कम्तिमा 60 सेमी हुनेछ यदि मन्त्री मा फिट गर्न सक्नुहुन्छ। पिघलती सतहहरु 60 80 सेमी को एक चौडाई आवश्यक पर्दछ।
anthropometry को सिद्धान्त
आकार र भान्सा सेट को स्थान औसत मापदण्डहरु को गणना अन्तरनिहित सुरु बिन्दु रूपमा के लिएको थियो? को गणना लागि आधार एक चिल्लो र थप पकाउने को क्षेत्र मा सञ्चालन गर्न सहज अनुमति दिन्छ जो एउटा व्यक्ति, को anthropometric विशेषताहरु थिए। अर्को शब्दमा, को हेडसेट को स्थान स्थान मा विभिन्न आवश्यक कुराहरू पुग्न मानिस सक्षम हुनुपर्छ। तर, औसत गणना बरु पारंपरिक छन्, त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत हेडसेट परियोजना विकास समयमा जहाँ तपाईं फर्नीचर राख्न योजना तपाईं ध्यान दिएर कागज कसरी र गणना गर्नुपर्छ। यो केही मजा ल्याउन, सही भान्सा क्षेत्र प्राप्त गर्न भविष्यमा तपाईंलाई मदत गर्नेछ।
के गणना मा खातामा लिएको छ?
यो रेखाचित्र मानक आकार सेट विचार गर्नुपर्छ र तिनीहरूले आफ्नो कोठा मा फिट गर्न सक्छन् कसरी। एक भान्सा आदेश गर्दा countertops को उचाइ यो खातामा स्थान र लुगा धुने को आयाम र खाना पकाउने Hob लिन आवश्यक छ 85 सेमी छ। तपाईं नयाँ फर्नीचर निर्माण अघि विद्यमान वस्तुहरु नियन्त्रण माप बनाउन, सार्दा वा कार्यात्मक तत्व केही स्थिर प्रकृति को संभावना विचार गर्नुहोस्। रेखाचित्र को रूप मा कागज मा गणना स्थानान्तरण, को ड्राफ्ट प्रयोग गर्न नडराऊ। सबैभन्दा कागज मा स्थिति रूपबाट वास्तविकता सबै तत्व को सफल नियुक्ति सुनिश्चित गर्नेछ।
धेरै लाभदायक आफ्नो भान्सा तयार हेडसेटहरू मा राख्न। हामी यो प्रकाशन को सामाग्री सिक्नुभयो रूपमा, अलमारी घर फर्नीचर र पनि समतल मा नियुक्ति र सम्मिलन संग समस्या सबै आकार रिलीज संग विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताहरु लागि त्रुटि को एक सानो मार्जिन संग एकल मानक गर्न सज्जित किनभने हुन सक्दैन। फर्नीचर आदेश, समाप्त उत्पादन भन्दा अधिक महंगा 25-30% मा घर को मालिक खर्च हुनेछ गरे। र यो आंकडा छैन सीमा छ। हामी विकल्प विचार गर्न सिफारिस र उनीहरूको राख्दै को impossibility को मामला मा परिसर को व्यक्तिगत विशेषताहरु, साथै आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित, फर्नीचर आदेश मौका मा समाप्त किन हो।
सर्वश्रेष्ठ चिया माटोको बिजुली: ग्राहक समीक्षा
कसरी छिटो र सजिलै हात Grinder सङ्कलन गर्न
दैनिक वस्तुहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ - Tableware
Mincer "Bork" - यो मूल्य मुद्रा खर्च छ
Aerogrill VES बन्चरो 730: निर्देशन र प्रतिक्रिया
Multivarki लागि प्यान: सुविधाहरू।
ओवन मा Utyatnitsu धुनमा: पकाउने सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु र समीक्षा विशेषताहरु
गणित मा परीक्षा र परीक्षा Gia लागि तयार
ड्राई चिनाई को एक मिश्रण। उत्पादकहरु को समीक्षा
जूता RIEKER: समीक्षा, आयोमी ग्रिड, पसलहरूमा को ठेगाना
Bailiffs - यो हुनुहुन्छ? कानुनी अधिकारी सेवा
मेयोसिस र यसको चरणहरू। माइयोसिसका चरणहरूको लक्षण। जीवहरु को पुनरुत्थान। Mitosis र meiosis को समानताहरु
तर किन आवश्यक छ, दहन को यो विशिष्ट गर्मी
कसरी प्रणाली भित्र भर्चुअल ड्राइभ थप्न?
छोराछोरीलाई "7 Dwarfs को स्कूल" को लागि पुस्तकहरू एक श्रृंखला विकास: समीक्षा